फोनिज प्रदेश १ मा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन « Drishti News – Nepalese News Portal
फोनिज प्रदेश १ मा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन
‘लिम्बुवान किरात’को माग
२९ पुस २०७८, बिहिबार 10:45 am
काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को दोस्रो प्रादेशिक महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ ।
पथरीमा बिहिवार सप्पन्न महाधिवेशनले प्रदेश १ अध्यक्षमा सन्तवीर लामाको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय नयाँ प्रादेशिक कार्यसमिति निर्वाचित गरेको हो ।
लेखा समितिका संयोजकमा महेन्द्र मादेन र सदस्यहश्रमा दिपक राई र नेत्रकुमार सुनुवार निर्वाचित भएका छन् । अनुशासन समिति संयोजकमा वीरबहादुर पापो र सदस्यहरुमा सोनीकुमार आङदेम्बे र विजयकुमार राई निर्वाचित भएका छन् । महाधिवेशनमा प्रदेश १ का १४ जिल्लाबाट एक सय बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
महाधिवेशनले ११ बुँदे समसामयिक ‘पथरी घोषणापत्र’ पारित गरेको छ । महाधिवेशनले प्रदेश १ को नाम पहिचान र सामार्थ्यको आधारमा ‘लिम्बुवान–किरात’ राख्न माग गरेको छ ।
यस्तो छ ११ बुँदे पथरी शनिश्चरे घोषणपत्र
३. प्रदेशस्तरीय आदिवासी जनजाति आयोग÷प्रतिष्ठानको गठन गरियोस् ।
११. यो महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गदर्छ ।